Iseti yehupu zabantwana | Imisebenzi yezandla
UJenny monge | | Imisebenzi yezandla, Imisebenzi yeekhadibhodi, Imisebenzi yezandla zabantwana, Ukusetyenziswa kwakhona
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje masibone ukuba ungayenza njani le hoop umdlalo nabantwana kwaye uchithe ixesha lokuzonwabisa ukhuphisana kwaye udlala njengentsapho.
1 Izinto esiza kuzidinga ukwenza iiseti zethu zamakhonkco
Izinto esiza kuzidinga ukwenza iiseti zethu zamakhonkco
Umqulu wekhadibhodi wephepha lasekhitshini okanye ezimbini zephepha langasese.
Iglu eyomeleleyo njenge-silicone eshushu.
Iimpawu zokumakisha okanye naluphi na olunye uhlobo lwepeyinti olunokusetyenziswa kwikhadibhodi.
Inyathelo lokuqala ngu usike onke amaqhekeza kwikhadibhodi. Siza kufuna amakhonkco aliqela, uninzi njengoko sifuna ngokwenene. Singazenza zibe zimbini okanye zontathu imibala eyahlukeneyo, ukuze ilungu ngalinye losapho libe namacici alo. Siza kusika isangqa esikhulu okanye isikwere.
Embindini wesangqa okanye isikwere esikhulu siza kunamathela kwiphepha lasekhitshini. Kwimeko yokusebenzisa amabini ephepha langasese, siya kuyincamathelisa le miqulu mibini ukuyenza ibe nde, sinokuyisonga ephepheni ukuze ihlale incanyathiselwe. Siza kuwuncamathisela umqulu ngeglu eyomeleleyo efana nesilicone eshushu.
Nje ukuba zonke iziqwenga zisikwe kwaye zinamatheliswe, masiqale ukuhombisa. Singapenda isiseko sesangqa kunye nomqolo ngombala esiwuthandayo okanye sibashiye bengapeyintiwe. Emva koko, wonke umntu unokuzihombisa amacici abo ngendlela abathanda ngayo. Ngale ndlela, elowo uya kuba namakhonkco akhe awenzelwe ngokwahlukileyo ngaphandle kwengxaki xa edlala.
Nje ukuba umdlalo ulungele, yi ixesha lokuqala ukudlala. Singadlala enye kuphela ukuba sizicelomngeni. Singadlala abantu abaliqela, umntu ngamnye aphose iringi de iphepha ligcwaliswe kwaye sibale ukuba ngubani ofake amakhonkco angaphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Iseti yehupu zabantwana
Iintambo zobugqi ezinamaso
Ipeyinti elula yokuhombisa iboho